Tue, May 26, 2020 at 7:25pm
काठमाडौँ, १२ भदौ बुधबार दोहोरो अङ्कले घटेको धितोपत्र बजारमा आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक पुनः झिनो अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार नेप्से १.३३ अङ्कले घटेर एक हजार १९६.४१ मा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ०.१६ बिन्दुले घटी २६१.२४ मा पुगेको छ । नेप्से घटेसँगै कारोबार रकमसमेत सस्तैमा समेटिएको छ । कुल १७० कम्पनीको नौ लाख ७५..
काठमाडौँ, ८ भदौ धितोपत्र बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको छ । गत साता उतारचढावपूर्ण अवस्थामा रहेको नेप्से साताको पहिलो दिन आज पनि ओरालो लागेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से ३.४५ विन्दुले घटेर एक हजार २०९.६२ विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ०.२७ विन्दुले घटेर २६३.४३ विन्दुमा पुगेको छ । नेप्से ओरालो लाग्दा कारोबार रकमसमेत सस्तैमा समेटिएको..
काठमाडौँ, ५ भदौ यस साता धितोपत्र बजारका कारोवार मापक नेप्से परिसूचक उतारचढावपूर्ण रहेको छ । साताको अन्तिम दिन आज नेप्सेमा झिनो अङ्कको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से ०.९९ बिन्दुले घटेर एक हजार २१३.०६ बिन्दुमा झरेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक भने ०.२९ बिन्दुले बढेको छ । नेप्से ओरालो लागेसँगै कारोवार रकममा समेत गिरावट आएको छ । कूल १७२..
काठमाडौँ, ४ भदौ कहिले घट्ने तथा कहिले बढ्दै असन्तुलित अवस्थामा रहेको शेयर बजार आज भने स्थिर जस्तै देखिएको छ । शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले सुधार आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ०.४२ बिन्दुले बढेर एक हजार २१४.०५ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ०.२२ बिन्दुले बढेर २६३.४१ बिन्दुमा कायम भएको छ । नेप्सेमा..
काठमाडौँ, २ भदौ राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको नेप्सेको १७ लाख २९ हजार ९८९.५० कित्ता सेयर असार ३१ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सेयर लिलामीमार्फत खरिद गर्ने सोमबार (भदौ २ गते) अन्तिम दिन हो । यसमा बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाहरुले गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न..
काठमाडौँ, १ भदौ । निरन्तर ओरालो लाग्दै धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि झर्ने क्रम जारी रहेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से ९.२० बिन्दुले घटेर एक हजार २१४.८३ बिन्दुमा झरेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक १.५७ बिन्दुले घटेर २६३.११ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्से ओरालो लाग्दो कारोवार रकमसमेत सस्तैमा समेटिएको छ । कूल १६० कम्पनीको ११ लाख..
काठमाडौँ, ३२ साउन धितोपत्र बजारमा यस साता कूल १७१ कम्पनीको शेयर कारोवार भयो । चालू आर्थिक वर्ष लागेदेखि नै निरन्तर आरोलो लागेको बजार यस साताको अन्तिम दिन एक हजार २२४.०३ मा पुगेर बन्द भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार यस साता कूल ७५ लाख ४४ हजार १३ कित्ता शेयर रु एक अर्ब ७८ करोड ९२ लाख २३ हजार ६६६ मा मूल्यमा..
काठमाडौं, ३१ साउन । धेरैलाई थाहा नै हाेला सबैभन्दा महंगो सेयर भएको कम्पनी कुन हाे ? कतिपयले अनुमान पनि लागाएकै हाेलान् । बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपालको एक कित्ता सेयरकाे मूल्य १९ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ छ । यो सबैभन्दा महंगो सेयर हो । यद्यपि यो सेयरको मूल्य घटेर यति आइपुगेको हो । यसको पछिल्लो कारोबार साउन २१ गते भएको थियो । सर्वाधिक महंगो भएकै..
काठमाडौँ, ३० साउन । धितोपत्र बजारमा लगातार ओरालो लाग्दै आएको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक साताको अन्तिम दिन आज पनि घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १.८६ बिन्दुले घटेर एक हजार २२४.०३ मा पुगेको छ । त्यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक १.२४ अङ्कले घटेर २६४.६८ मा पुगेको छ । परिसूचक घटेसँगै कारोबार रकम पनि औसतमै सीमित रह्यो । कुल १५९ कम्पनीको..
काठमाडाैं, २९ साउन । बुधबार सेयरबजार परिसूचक नेप्से ५.१७ अंकले घटेकाे छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार सूचक घटेर १२२५.९० विन्दुमा झरेको हाे। ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ सूचक पनि १.२२ अंकले ओर्लिएको छ। कुल १ सय ६९ वटा कम्पनीको कारोबार भएकामा १० लाख कित्ता सेयर मात्रै बिक्री भएका छन्। कुल १२ समूहको कारोबार भएकामा माइक्रोफाइनान्सबाहेक अन्य सबैको सूचक रातो छ। कारोबारका..
काठमाडौँ, २७ साउन अब शेयर विक्री गर्दा ब्रोकर कम्पनीमा गएर ल्याप्चे लगाउन नपर्ने भएको छ । भारित औषत लागत गणना गर्ने नयाँ व्यावस्थालाई कायम गर्दै धितोपत्र बोर्डले इलेक्ट्रोनिक माध्यामबाटै कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरेसँगै ब्रोकरकोमा पुगेर ल्याप्चे लगाउनु नपर्ने भएको हो। धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्चेन्ज तथा अर्थ मन्त्रालयलाई यसअघिकै व्यवस्था अनुसार सिडिएससीको प्रणालीकै आधारमा भारित औषत लागत गणना गर्न सिफारिस गरेको छ..
काठमाडौँ, २७ साउन लगातार ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार कारोवार मापक नेप्से परिसूचकमा आज भने झिनो अङ्कले सुधार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ०.१३ बिन्दुले सुधार आई एक हजार २३३.८५ बिन्दुमा कायम भएको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ०.१२ बिन्दुले बढेर २६७.७२ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेमा सामान्य सुधार भए पनि कारोवार रकममा भने सुधार देखिएको छैन ।..
काठमाडौँ, २६ असार धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ४.८४ बिन्दुले घटेर एक हजार २३३.७१ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ०.४० बिन्दुले घटेर २६७.६० बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्से ओरालो लागेसँगै कारोवार रकमसमेत सस्तैमा समेटिएको छ । कूल १६६ कम्पनीको ११ लाख ४५ हजार ५०७ कित्ता शेयर..
काठमाडौं, २३ साउन । साताको अन्तिम दिन बिहिबार सेयर बजारमा १० अंककाे गरावट आएको छ । आज सेयर कारोबार मापन गर्ने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज 'नेप्से' परिसूचकमा १० अंकको गिरावट आएको हाे। नेप्से ९.९२ अंकले घटेर १ हजार २ सय ३८.५६ अंकमा पुगेको छ । नेप्से घटेको दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि १.९६ अंकले घटेर २६८ अंकमा पुगेको छ । कारोबारमा आएका १२ वटै समूहगत उपसूचक ओरालो..
काठमाडौँ, २२ साउन धितोपत्र बजारमा केही दिनदेखि ओरालो लागेको नेप्से परिसूचक आज सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार शेयर कारोवारमापक नेप्से परिसूचक २.७५ अङ्कले बढेर एक हजार २४८.४८ मा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ०.८६ अङ्कले बढेर २६९.९६ मा पुगेको छ । परिसूचक बढेपनि कारोबार रकममा भने अपेक्षित सुधार आउन सकेन । आज कूल १७२ कम्पनीका ११..
काठमाडौँ, २१ साउन धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज करिब १० अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ९।३६ अङ्कले घटेर एक हजार २४५।७३ मा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक १।९१ अङ्कले घटेर २६९।१० मा पुगेको छ । स्टकका अनुसार कुल १६९ कम्पनीका १४ लाख ४९ हजार ६९७ कित्ता शेयर रु ५४ करोड सात..
काठमाडौं, २० साउन । साेमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज 'नेप्से'मा ४ दशमलव ५५ अंककाे गिरावट आएकाे छ । सेन्सेटिभ इन्डेक्ससमेत शून्य दशमलव ७७ अंकले घटेको आजको कारोबार समग्रमा करिब ५ अंकले गिरावट आएको हो । आज नेप्से ४ दशमलव ५५ अंकले घटेर १ हजार २ सय ५५ दशमलव ०९ को बिन्दुमा पुगेर कारोबार बन्द भएको छ । त्यस्तै गरी ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको मापन सेन्सेटिभ परिसुचक शुन्य दशमलव..
काठमाडौँ, १२ साउन धितोपत्र बजारमा यस साता पनि दुई अर्ब बराबरको शेयर कारोवार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कूल १७१ कम्पनीको ७४ लाख ८० हजार ८५५ कित्ता शेयर रु दुई अर्ब आठ करोड ६२ लाख १५ हजार ६७१ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । अघिल्लो बिहीबार अर्थात् साउन ९ गते नेप्से १४.१५ विन्दुले घटेर एक हजार २६९.९२ विन्दुमा बन्द भएको नेप्से..
वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमतिपत्र दिइने
काठमाडौँ, १७ साउन । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्र दिने भएको छ । स्टकको उक्त निर्णयपछि लामो समयदेखि शेयर बजारमा माग हुँदैआएको र लगानीकर्तालेसमेत लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय सम्बोधन हुने भएको छ । ‘धितोपत्र दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्रका लागि सिफारिश कार्यविधि, २०७६’ बमोजिम तोकिएका मापदण्ड पूरा भएका वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई उक्त अनुमतिपत्र प्रदान गरिने स्टकले..
काठमाडौँ, १६ साउन । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १.७४ बिन्दुले घटेर एक हजार २६३.८४ बिन्दुमा झरेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत आज ०.७१ बिन्दुले घटेर २७२.५३ मा झरेको छ । कूल १६८ कम्पनीको २० लाख ६० हजार ६७८ कित्ता शेयर रु ५९ करोड पाँच लाख ८८ हजार..
साढे ५ अंकले बढ्यो शेयर बजार
काठमाडौं, १५ साउन । बुधबार सेयरबजार उकालाे लागेकाे छ । शेयर बजार बुधबार ५ दशमलव ५ अंकले बढेको हाे । १ हजार २ सय ५९ दशमलव ५४ अंकमा रहेको शेयर बजार बन्द हुने बेलासम्ममा १ हजार २ सय ६५ दशमलव ४२ अंकमा पुगेको नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले जनाएकाे छ । बुधबार कारोबार भएका समुहमध्ये सबैभन्दा धेरै निर्जिवन बिमा समुहको परिसुचक बढेको छ । त्यस्तै माइक्रोफाइनान्स..
एनएमबि क्यापिटल र एनआईसी एशियाले गरे मासिक विवरण सार्वजनिक, कसको मूल्य कति बढ्यो?
काठमाडौं, १४ साउन । एनएमबि क्यापिटल र एनआईसी एशियाले मासिक विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज 'नेप्से'मा सूचीकृत यी दुई सामूहिक योजनाले मासिक विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। नएमबि क्यापिटलले संचालनमा ल्याएको 'एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-१ु र एनआईसी एशिया क्यापिटलले संचालन गरिरहेको 'एनआइसी एसिया ग्रोथ फन्ड' को मासिक विवरण सार्वजनिक भएको हो।सार्वजनिक भएको विवरणमा 'एनआइसी एशिया ग्रोथ फन्डु'ले प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य(न्याभ)..
शेयर बजार : नेप्से परिसूचक ३ अङ्कले बढेर १ हजार २ सय ५५ अङ्कमा
काठमाडौँ, १३ साउन आइतबार दोहोरो अङ्कले आरोलो लागेर बन्द भएको शेयर बजार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज भने तीन अङ्क बढीले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ३.१८ विन्दुले बढेर एक हजार २५५.९८ विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक १.०८ विन्दुले बढेर २७१.११ मा पुगेको छ । कारोवार रकम भने आइतबारको तुलनामा घटेको छ ।..
काठमाडौँ, १२ साउन मौद्रिक नीतिपछि उकालो लाग्ने अपेक्षा रहेको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज पुनःदोहोरो अङ्कले ओरालो लागेको छ । पूँजीगत लाभकरलगायतका विषयमा रहेको विवाद समाधान नभएको भन्दै लगानीकर्ताले शेयर खरीद मात्रै गर्न चोहको र बेच्ने कमै मात्र भेटिएपछि बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ । स्टकका..
काठमाडौँ, ९ साउन चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि शेयर कारोवारमा गुणात्मक सुधार आउने अपेक्षामा रहेका लगानीकर्ता बिहिबार निराश भएका छन् । शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १४.१५ अङ्कले घटेर एक हजार २६९.९२ मा पुगेको छ..
नेप्से उकालो यात्रामा, १ अर्ब ४० करोडको म्यूचुअल फण्ड बिक्री हुने
काठमाडौँ, ७ साउन धितोपत्र बजारमा आज शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक करीब छ अङ्कले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ५.९४ बिन्दुले बढेर एक हजार २७७.१७ बिन्दुमा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.९२ ले बढेर २७४.४१ बिन्दुमा पुगेको छ । परिसूचक बढे पनि आज कारोवार रकम भने उल्लेख्यरुपमा वृद्धि हुन सकेन..
काठमाडौँ, ६ साउन धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज सामान्य अङ्कले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक २.४८ विन्दुले बढेर एक हजार २७१.२३ विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.१९ विन्दुले बढेर २७३.५० मा पुगेको छ । नेप्से उकालो लाग्दा कूल १६६ कम्पनीको १० लाख ८४ हजार ५५३ कित्ता..
काठमाडौँ, ५ साउन साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ३.७५ बिन्दुले घटेर एक हजार २६८.७४ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ०.५३ ले घटेर २७३.३० मा पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से ओरालो लागेसँगै कारोवार रकमसमेत खुम्चिएको छ ।..
शेयर बजार : नेप्से परिसूचक थामियो, ३ उपसमूहको शेयर उकालो
काठमाडौँ, २ साउन । धितोपत्र बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक उकालो लाग्नेक्रम आज थामिएको छ । बुधबार दोहोरो अङ्कले उकालो लागेर बन्द भएको बजारमा नेप्से परिसूचक २.३७ बिन्दुले घटेर एक हजार २७२.४९ विन्दुमा पुगेको हो । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.२७ विन्दुले घटेर २७३.८४ विन्दुमा झरेको छ । नेप्से ओरालो लागे पनि कारोवार रकम भने औसतमा रहेको..
काठमाडौँ, १ साउन । आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबारमापक नेप्से परिसूचक लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउँदै दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कारोवारमापक नेप्से परिसूचक १५.८५ अङ्कले बढेर एक हजार २४७.८६ मा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीका कारोबारमापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत २.८६ विन्दुले बढेर २७४.११ मा पुगेको छ । नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेपनि..
Results 589: You are at page4of 20